अनवरत यात्रा – मझेरी डट कम
‘अहो आजको दिन!’ मनमा उर्लेर आएको बवन्डरलाई सम्हाल्दै नजिकैको कुर्सीमा थ्याच्च आफूलाई थचारिदिन्छु । लस्त शरीरलाई कुर्सीको ढाँचाले निकै टेवा दिन्छ । रात चकमन्न छ । कहीं केही आवाज सुनिदैन चारैतिर निस्पट्ट सुनसान छ । मौनता व्याप्त छः लाग्छ रातलाई पनि नियास्ह्रो लागेको छ, आफ्नै मौनतामा पिल्सिरहेको छ । पुसको चिसो रातमा पनि पसीनाले निथुक्क भिजेको छ जिउका कपडा । यस्तो भान हुन्छ, यो मौनताले मलाई धेरै कुराहरु अमौखिक रुपमा भनिरहेको छ; पोख्दैछ असहाय निरीह भई । अनौठो छटपटीले डेरा जमाएको छ यो मुटुमा । ‘खाना खाने होइन’ यो आवाजसँगै झल्यास्स हुन्छ मन अनि वर्तमानमा आउँछ । खान मन छैन भन्ने भावले टाउको आफै हल्लिन पुग्छ । टेबुलमा राखेको एक गिलास पानी तनतन पिउँछु, केही सास आएजस्तो हुन्छ । ‘के गर्नु यस्तै रहेछ हाम्रो जिन्दगी’, सानी दिदीको आवाज सँगै उनको र मेरो आँखा जुध्न पुग्छ । टिलपिल टिलपिल गर्दैगरेका, भित्र गडेका ती आँखाहरुले धेरै भाव अभिव्यक्त गरीरहेको पाउँछु । उनको त्यो आँखामा म धेरै बेर हेर्नसक्दिन; मेरो आँखामा पनि छाल उम्लेर आउन खोज्छ। छाती र आँखाको बीचमा कता हो कता गाँठो परेको भान हुन्छ । सानी दिदीको नजर चोरेर आँखाका पानी बग्न आतुर हुन्छन् । तर अनुभवी आँखाले भेउ पाइहाल्छ; म असमर्थ हुन्छु । उर्लिन लागेको भेललाई कसरी पो रोक्न सकिन्छ र सानी दिदीको ढाँढसपूर्ण एक स्पर्शले यो भेलले गति पाउँछ र शिवजीको जराबाट निस्केकी गंगा सरह उर्लिदै बहन थाल्छ । यो निस्पटृट अन्धकारलाई चिर्दै यो बन्द कोठाभित्र दुई प्राणीको रोदनले लाग्छ, यतिबेला यो संसार नै थर्किदैछ; प्रलय आउँदैछ । यो चिसो सिरेटो र कोठाका प्रत्येक निर्जिव चीजले यो क्षणलाई अझ मर्माहित र दुखित बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गर्दैछन् । बिहान देखिको निस्किन नसकेको गुम्सिएको आँसु अब बग्दैछ । समुद्रमाथि भएकाहरुलाई के थाहा, समुद्र भित्रको हलचल? बाहिरबाट त ऊ शान्त निराकार नै देखिन्छ । त्यसमा कति निरीहपन, असहायपन छटपटी लुकेको छ भन्ने कु्रा त्यसको गहिराइमा जानेलाई मात्र नै त थाहा हुन्छ!
एकाबिहानै टिरिन टिरिनको धुनले दिनचर्या अर्कोतिर धकेलेको थियो । ‘दिदी सवितालाई त अस्पताल पो लानुपर्ने जस्तो छ त; हेर्नुस् न अस्ति रातिदेखि आएको जरो अहिलेसम्म पनि आर्लेन’ अर्कोतिरबाट आवाज गुन्जियो । हेलो नभन्दै ललाक्लुलुक भईसकेका हातगोडालाई सम्हाल्दै भरिएको गला सफा गर्दै ‘ल म आइहाले’ भन्दै थपक्क रिसिभर राखेर जुत्तालाई पाइतालाले घिसार्दै हुरतुरिदै होस्टेलतिर हानिएकी थिए । होस्टेल र मेरो घरबीच बीस मिनेटको बाटो पनि मलाई एक जुग जस्तो लागेको थियो । आँखामा सविताको अनुहार मात्र आइरहयो; कानमा एकहोरा ‘दिदी म जिउन चाहन्छु, अहिले मेरो उमेर नै कति भएको छ र? मैले संसार हेर्न, रहर गर्न नपाउनु दिदी’ भन्ने शब्द गुन्जिरह्यो ।
सविता मात्र १९ औ वसन्त पार गरी २० औमा टेकेकी केटी । मात्र १ वर्ष र चानचुन महिना भएको थियो यो पुनर्स्थापनागृहमा ल्याइएकी । ऊसँग कुरा गर्न कसैको बर्गतले भ्याउदैनथ्यो । ऊ कोहीसँग कुरा गर्दिनथी । अनुहारमा न हाँसो थियो; न आँसु। कस्तो क्षण त्यो जीवनको! कुनै भावना थिएन, शायद कुनै सोच थिएन । न त कुनै उमंग, न रहर । जीवनको यो अवस्थामा उसको लागि कुनै अर्थ थिएन, यस्तो भान हुन्थ्यो उसँग भेट्ने सबैलाई । प्रयास सबै विफल भएका थिए उसलाई पुनः जिवित तुल्याउन । भन्छन्, समय बलवान हुन्छ; यसले ठूला ठूला घाउमा पनि मलम लगाउन सक्छ रे! हो रहेछ । जसै जसै बिस्तारै समयले आफनो काँचुली फेर्दै गयो त्यसरी नै बिस्तारै हाम्री सविता मुस्कुराउन अनि रुन सक्ने भई । लाग्थ्यो शरीरमा अब रक्तसंचार हुदैछ । ओइलाउन लागेको बोटमा झरी पछि पालुवा पलाउँदैछ । यो पुनर्स्थापनागृहभित्र नै मानौ एउटा वसन्त ऋतुको आगमन भएको थियो, लामो अन्तरालपछि । चराचुरुंगीहरु बिस्तारै चिरचिर गर्न जान्दैथिए; पवनले अब पोल्ने नभई शीतलता दिन जान्न थालेको थियो । विभिन्न स्थानबाट विभिन्न परिस्थिति भोगेर आएका कलिला देखि युवासम्मका महिलाहरुको जीवनको भण्डै अन्तिम गन्तव्य बनेको यो गृहमा मानौ अब खुशीले अलिकति मात्र भएपनि आफनो रंग छर्न आइपुगेको भान हुन्थ्यो ।
तर विडम्बना! जस्तो वसन्त ऑएपनि, जस्तो खुशी ल्याए पनि, समय जति नै बलवान भए पनि त्यसले मानिसको पूर्वस्थिति कहाँ फर्काउन सक्ने रहेछ र ? हास्दा हास्दै रुनु पर्ने अवस्था त त्यहाँ छदै थियो र अझै पनि छ । एचआईभी पोजेटिभ भन्ने कुरा त हाम्रा जस्ताको नाम पछाडी त थर जस्तै गरी टाँसिने क्रम त कहाँ टुंगिने रहेछ र ?यो नौलो नामको भुँमरीमा पर्दा आफनो नाम नै समाजका भनाउँदाहरुले बिर्साउँदारहेछन् । नाम जे सुकै होस्, पहिले यो शब्द नै लिइन्छ – ‘एचआइभी पोजेटिभ’ , बडो सानका साथ भन्छन् नेगेटिभ हुनेहरु । अलिकति पनि मानवता झल्किन्न उनीहरुमा । सासले तिमीहरुको पनि एकदिन त साथ छोड्छ नि! हाम्रो सवालमा अलि छिटो छोड्छ होला त्यति त हो । तर जतिसम्म सास छ आस पनि त रहनु पर्छ । त्यो एक मुठ्ठी सासको लागि सबैसँग लड्नु पर्ने बाध्यता कहिल्यै टुङ्गिएन । एक सर्को सास निस्फिक्रीसँग तान्दाको अनुभवको खाँचो हामीलाई पनि छ । एक खुल्ला आकाशको स्वतन्त्रता हामीलाई पनि चाहिन्छ, हामी पनि मानवीय प्राणी हौ, आफूलाई मानव भन्नेहरु यसको वकालत कसरी गर्छौ?
मलाई आज पनि स्मरण छ; सविताका ती शब्दहरु, ती वेदनाहरु, ती अकथित अनि अव्यक्त भावनाहरु, छातिभित्र दबाएर राखिएका अनुभूतिहरु, हरेक घटनाक्रमसँगै जन्मिएका अनगिन्ती भोगाईहरु । एउटा मानिसले कतिसम्म सहन सक्छ भन्ने कुराको कुनै सीमा नहुदोरहेछ; उसको कथा सुनेर पुनः म मा यो सोच बलवान हुन्छ । पत्थर भन्दा पनि साह्रो बनाउन कसरी परिस्थितिले सिकाउंछ – यो उसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । शायद यो भन्दा राम्रो उदाहरण प्रकृतिले दिन सक्दैन होला । सविता अकसर भन्ने गर्थी ‘दिदी मेरो के दोष थियो र संसार के हो भन्ने उमेर नै भएको छैन; म त मरी पो हाल्छु है। दिदी मलाई तपाइहरुलाई छोडेर जाने मन छैन ….। यति छिटै म मर्ने रे मेरो के दोष छ र?।मलाई बचाउनुहोस् दिदी।’ यी यस्ता शब्दहरु थिए जसले मलाई आजन्म पछयाइरहनेछन् । म अनुत्तरित छु; उसको यस भनाईप्रति प्रतिकृया दिने मसँग कुनै शब्द छैनन् । मलाई औडाहा हुन्छ । अब त … खाली सम्झना मात्र शेष छ उसको ।
अस्पताल लाने बेलामा बाटोमा उसले भनेका शब्द मात्र मानसपटलमा घुमिरहेका छन् । ‘दिदी म जाने बेला भयो हगि? तर म अहिले जान चाहदिन म यही संसारमा रमाउन चाहन्छु । एकपटक आमाबुबालाई हेर्ने इच्छा थियो । त्यो नपुग्दै म जान लागे। जिन्दगी मेरो र म जस्ताको लागि रहेन छ हगि?’ । सबैका नयनहरुमा टिलपिल गरिरहेका तर झर्न नसकेका आसु स्पष्टसँग देखिन्थ्यो । नरम तर ढृढतापूर्ण मेरा हेराइले यी सबैका नयनलाई नियन्त्रित गरिरहेको अनुभव गरेकी थिए । अनि नयनहरु त्यही अनुरुप पालना गर्दैमा व्यस्त भएका थिए । हतासिदै अस्पतालको शैयामा सवितालाई सुताउदाको पल क्षणिक नै भएपनि अलिक हलका भएको अनुभूति भएको थियो । कमसेकम अस्पतालमा त ल्याउन सकियो विशेषज्ञको माझमा । अब प्रार्थना मात्र सम्भव थियो केवल प्रार्थना । मानिस कति निरीह, दयनीय एक्लो हुदोरहेछ, जतिसुकै जहाँ भएपनि उसको नियन्त्रणमा खै के नै पो हुदोरहेछ? कलिलै उमेरमा नारकीय जीवन भोगेर बल्ल बल्ल बाँच्ने हाँस्ने चाह पलाएको थियो । जिउँदै रहेछु भन्ने कुरा उसको मन मस्तिष्कले अनि शरीरले बल्ल त बुझ्दै थियो । तर …… त्यो एक क्षणको खुशी पनि दैवले सहेन । यो भौतिक संसारमा यति नै रहेछ उसले लेखेर ल्याएकी । यमराजको अगाडी कसको पो जोड चल्छ र? सासले उसको साथ छोडीसक्यो भन्ने थाहा हुनासाथ यो चलायमान संसार एकछिन अडियो । गृहका हरेक प्राणी पुनः निर्जीव भए …। थाहा त थियो उसले छोडेर जादैछे तर यर्थाथमा जब सुनिन्छ त्यतिखेर मन जति नै बलियो भएपनि काम्न थाल्दोरहेछ । सबतिरको निस्तब्धताले मानौ पुरै संसारलाई क्वाप्प निलेको थियो । त्यसबखत मेरा नयनले मेरो भाव बुझेँ झै आफूबाट आँशुलाई नअलग्याउन सक्षम भए, अनि िकंमकर्तव्यविमूढ भई टोलाइरहे । जब अलिकति होस आए झै भयो गृहका अरुहरुलाई थप्थपाउदा थप्थपाउदै यी हातहरु अनि यो गला कहिले थाके थाहा नै पाइन । अनि कतिखेर घर फर्किएछु त्यो पनि होसै भएन ।
लगभग सत्तरी हजार एचआइभी पोजेटिभहरुमध्येबाट एउटी यो संसारबाट विदा भई खाउँखाउँ लाउँलाउँ हुने उमेर मै। शायद ठीकै भयो ऊ यस सांसारिक दुःखबाट मुक्त भई । त्यो त एकदिन सबैले जानु नै पर्छ, मात्र कुरा हो ढिलो र चाँडोको । तर जति दिन जीवित थिई के मानव भएर बाँच्न पाई? के आफ्नो अनुभूतिहरुमध्ये खुशी र हासो सन्तोष र आनन्दसग ऊ परिचित हुन सकी? के उसको यी कुराहरुमा कुनै हक थिएन? के सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न उसले पाउनु पर्दैन थियो? के ऊ नै दोषी थिई यी सबै परिस्थितिको लागि ? के एचआइभी पोजिटिभ मानव होइनन् ? घर परिवार समाजमा एउटा मानवले पाउनुपर्ने हक अधिकार को प्राप्ति के उसका लागि थिएनन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुले मेरो सामुन्ने ओइरन्छन् । एक अट्को सास रहदासम्म पनि ‘दिदी म बाँच्न चाहन्छु’ भन्ने शब्द मेरा कानमा हरदम गुन्जिरहन्छन् । मलाई उकुसमुस हुन्छ … कहाली लाग्छ… आफ्नो निरीहपन देख्दा आफैसँग रिस उठ्छ ।
अचानक एक न्यानो हावाको झोक्काले मेरा रुदारुदै निदाएका नयन अनि थाकेका हातहरुमा छोएर जान्छ । शीतलहरीपछिको एक अनौठो अनुभवले घेरिएको पाउँछु आफूलाई । हठात् आएको भेल शान्त भएको घमाइलो बिहानीका किरणहरुले लाग्छ मलाई नै बिउँझाउने काम गरीरहेछन् । यतै कतैबाट सुमधुर स्वरको आभास हुन्छ । फेरी देख्छु उही सविताको अनुहार । मलाई भन्छ ‘दिदी उठ्नुस्, हेर्नुस् बिहान भइसक्यो, सूर्यले नयाँ बिहानी ल्याएको छ । एउटी सविता गएकी हो, तपाईले यस्ता थुप्रै सविताहरु देख्नुहुन्छ । मेरै अवस्थामा पुग्न तयार भएका पनि भेट्नुहुन्छ । यहाँ चारैतिर सविताहरु छन् जताततै । दिदी यो संसारमा अर्की सविता नजन्मियोस्। फेरी यस्तै अर्को कथा नसुनियोस् । मेरो यो आखिरी इच्छा हो दिदी’ । उसका प्रत्येक शब्द मेरो कोठामा ठोक्किदै हरेक कुनाबाट इको हुदै मेरो मष्तिस्कका हरेक कोषहरुलाई झंकार्दै बिलिन हुन्छ । मेरो मनमा अनेकन तरगले ज्वारभाटाको रुप लिदै केही अठोटका साथ एक निश्चित गति लिन आतुर भएको अनुभूति हुन्छ । जानेहरुलाई श्रद्धान्जलिका साथ बिदा गर्दै आउने दिनको तयारी गरी अघि बढ्नु छ; जसरी भएपनि, जस्तो परिस्थितिमा पनि, जुन अवस्थामा पनि । यस्तो विभित्स अवस्था अब कसैको जीवनमा नघटोस् । जीवन जीवन होस् भन्नाका लागि पनि फेरी आश बाँकी राखी पाइला चाल्नु छ निरन्तर … यो संघर्षमय यात्रा कमसेकम अहिले त रोकिनु हुँदैन … चलिरहनु नै पर्छ … निरन्तर… अनवरत संघर्ष… ।
4 thoughts on “अनवरत यात्रा”
tongmarmendok December 3, 2008 at 1:40 pm
मार्मिक कथा पस्किनु भएर एकछिन
मार्मिक कथा पस्किनु भएर एकछिन लाई एकोहोरो बनाइदिनु भयो ! कथा राम्रो लाग्यो ! खास गरी….. “” यो चिसो सिरेटो र कोठाका प्रत्येक निर्जिव चीजले यो क्षणलाई अझ मर्माहित र दुखित बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गर्दैछन् “” “” बिहान देखिको निस्किन नसकेको गुम्सिएको आँसु अब बग्दैछ “” र .. “”होस्टेल र मेरो घरबीच बीस मिनेटको बाटो पनि मलाई एक जुग जस्तो लागेको थियो”” यी हरफ हरु एक्दमै राम्रो लाग्यो !!! अरुपनी निरन्तर …अनवरत लेखीराख्नु होला !!!
akshaya December 4, 2008 at 2:27 pm
लेख उत्कृष्ट लाग्यो। तपाईंका
लेख उत्कृष्ट लाग्यो। तपाईंका हाइकु पढ्ने बानी लागिसकेको थियो। एस प्रकारको लेख भर्खर पढ्न पाए। तपाईंको बिषय प्रवेश, उपसम्हार र घटना क्रमलाई प्रस्ट हुनेगरी कुनै पनि स्रोता लाई आँखा भरी आसुँ नल्याइ धरै नपाउने गरी वयान गर्न सक्ने क्षमताको चर्चा नगरि पटक्कै सकिएन। जब जब म पढ्दै गएं मन एसरी बग्दै गयो कि मानौ म नै घटना को प्रतक्ष दर्शी हुँ। हरेक घटनाको र त्यो घटनाको भाव को उत्कृष्ट visualization तपाईंको लेखमा देखिन्छ। लेख्दै जानुस् है! म जस्ता श्रोतालाई राम्रो खुराक पस्कनु भयो अनी एसैगरी पस्कदै जानुस्। त्यसको ब्यग्र प्रतिक्षा रहनेछ। उत्तरोउत्तर् प्रगती को कामना सहित् ….
आश्मा December 4, 2008 at 6:06 pm
पढ्दा पढ्दै पात्रहरु
पढ्दा पढ्दै पात्रहरु थपक्क मन भित्रै बस्न आउने -मानौ पाठक आफैले नै त्यो परिस्थिति अवलोकन गरिरहेछ -साह्रै मार्मिक लाग्यो।पढ्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद!
preeti December 6, 2008 at 6:39 pm
जे.बी.जी , अक्षयजी,
जे.बी.जी , अक्षयजी, आश्माजी,
आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो पढिदिनु भयो, धन्यवाद । यहाँहरुका शब्दले मलाई अझ लेख्न उत्प्रेरित गर्नेछन् ।